उत्तर कोरिया अब क्षेप्यास्त्र परीक्षणको तयारीमा ! – Himal FM 90.2 MHz
उत्तर कोरिया अब क्षेप्यास्त्र परीक्षणको तयारीमा !
वासिंटन, माघ १५ – अमेरिकी अधिकारीहरुले उत्तर कोरिया क्षेप्यास्त्र परीक्षणको तयारीमा रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन् । उत्तर कोरियाको सोहाए अन्तरीक्ष स्टेशनमा देखिएको बढ्दो गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरुले यस्तो आशंका जनाएका हुन् ।
एक अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एएफपी समाचार एजेन्सीले जनाएअनुसार उत्तर कोरियाले उपग्रह वा रकेट परीक्षणको तयारी गरिरहेको छ । उसले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न लागेको हो या होइन भन्ने स्पष्ट भइनसकेको ती अधिकारीले जनाए ।
जनवरी ६ मा उत्तर कोरियाले गरेको परमाणु परीक्षणबाट विश्व चिन्तित बनिरहेको समयमा उत्तर कोरियाको नयाँ गतिविधि प्रकाशमा आएको हो । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा उत्तर कोरियामाथि जनवरी ६ को घटनालाई लिएर थप प्रतिबन्ध लगाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरिएको दाबी गरेको छ । तर परमाणु विशेषज्ञहरु भने विस्फोट त्यति शक्तिशाली नभएको भन्दै हाइड्रोजन बमको परीक्षणमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
भूउपग्रहमार्फत प्राप्त चित्रहरुको विश्लेषण गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरुले सम्भवतः एक साताभित्रै उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र वा रकेट परीक्षण गर्ने आँकलन गरिरहेका छन् ।